अदालतको फैसलापछि नवराज सिलवालको बढुवा ! - Naya Patrika
अदालतको फैसलापछि नवराज सिलवालको बढुवा !
नेपाल प्रहरीमा एकैपटक ११ जना डिआईजीको एआईजीमा बढुवा हुँदा नवराज सिलवाल किन परेनन् भन्ने व्यापक कौतुहलता छ । जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवाल अदालत गएकाले सरकारले उनको बढुवा नगरेको हो कि भन्ने आम धारणा छ । तर, सोमबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सरकारले एआईजी बढुवामा कुनै पूर्वाग्र नराखेको बताएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा सहभागी भएका गृहमन्त्रीले सिलवालको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनलाई बढुवा नगरिएको दावी गरे । अदालतको फैसला आएपछि त्यसका आधारमा उनको विषयमा निर्णय हुने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
उनले प्रहरी संगठनभित्र आफूले कसैलाई काखा र पाखा नगर्ने स्पष्ट पार्दै यसपटकको बढुवा यसअघिकै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा भएको जानकारी दिए ।